‘बुढेसकालमा पनि मेरो अभिनय हेरर सबैजना धेरै खुशी हुन्छन्’
साझा अनलाईन २०७३ चैत्र ३१ गते मा प्रकाशित 539 पटक पढिएको
बिगत लामो समय देखि दोधारा चाँदनीको रामलिला नाट्य मञ्चनमा हास्य कलाकारको भुमिकामा प्रखर देखिएका दान बहादुर थापा यस पटक पनि आफ्नो कोतवालको भुमिकामा खरो उत्रिने देखिएका छन् । सामन्य लेखपढ गरेका थापालाई उनको असली नामले भन्दा रामलिलामा प्रख्यात हास्य कलाकारको भुमिका रहेको राक्षसको नाईके कोतवालको नामबाट दोधारा चाँदनीको नामबाट चिन्निछन् । दोधारा चाँदनीको २०३४ सालको बेला सामन्य रामायणका पात्र वालीको भुमिका देखि आफ्नो कलाकारीतामा प्रबेश गरेका थापा अहिले ६० वर्षका छन् ।
२०३४ सालमा उनले वालीको पात्रलाई छाडेर जामन्तको अभिनय गरे । उनलाई जामन्तको पात्र पनि २०३६ सालमा छाडेर रामलिलाका खलनायकको पात्र रावणको प्रमुख सेनापती कोतवालको भुमिकामा उभिए । २०३७ को सेरोफेरोमा संचालन गरिएको रामलिला नाट्य मञ्चनमा आफ्नो अभिनयलाई दर्शक सामु सफलता पुर्वक पस्कन सके ।
समाजिक सदभाव तथा भगवान रामको चरित्रमा मञ्चन गरिदै आएको रामलिला नाट्य मञ्चनमा आफुलाई ढल्दो उमेरमा पनि एक प्रकारको शाहस प्रदान भएको उनि बताउछन् । ६० वर्षिय दान बहादुरका श्रीमती, १ छोरा, बुहारी र ३ वटा छारी छन् । दोधारा चाँदनी वडा नं. ७ मा स्थायी बसोबास गर्दै आएका थापा दोधारा चाँदनी बाबाथान स्थित कमलशा बाबा शिवालयमा पुजारी समेत हुन् । जनजाती भएर पनि आफु पुजारीको रुपमा समाजले स्थापित गरेकोमा आफुलाई निकै भाग्यमानी मान्छन् । रामलिलाको सन्दर्भमा राक्षसको नाईके कोतवालको भुमिका बिगत लामो समय देखि अभिनय गर्दैै आएका दानबहादुर थापासंग हाम्रा संवाददाता पप्पु गुरुङ्गले गरेको संक्षिप्त कुराकानी : –
यस पटक बिगतका तुलनामा आफ्नो भुमिकालाई कसरी निखार ल्याउनुभएको छ ?
अब बुढो भईसके । अरुलाई पालो दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ तर दोधारा चाँदनीमा रामलिला संचालन भएपछि बिरामी परेको अवस्थामा पनि अभिनय गर्न सकि नसकी गईहाल्छु ।
कस्तो लाग्छ तपाईलाई यत्रो वर्ष दोधारा चाँदनीको रामलिला नाट्य मञ्चनमा हास्य कलाकारको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दा ?
घरमा मेरो श्रीमती पनि खुशी हुन्छन् । अभिनय गरेर सबैलाई हसाउ भन्छन उनले । बुढेसकालमा पनि श्रीमती, छोरा, छोरीले हास्य कलाकार भईरहदा मेरो अभिनय हेरर खुशी हुन्छन् उनिहरु ।
हो । हामी २०३४ सालका थुप्रै कलाकार बिछडिएका छन् । बिजय दाईको देहान्त भयो । उहाँ राम्रो कलाकार सहित एक सामजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो । यस्तै रामलिलाका प्रखर रावणका किरदार प्रेम क्षेत्री भारतको दिल्लामा हुनुहुन्छ् । धेरै मेरो रामलिलाका साथीहरु छैनन् । अहिले पुराना कलाकारहरुमा प्रेम क्षेत्री, मोहन थापा लगाएतका कलाकार नयाँ कलकार संग अभिनय गर्दैछौ । पुरानो साथी नभएका सोच्दा नरमाईलो लागेर आउछ ।
हामी बिगत देखि स्थानियहरुको सहयोगबाट आदर्श रामलिला गर्दै आएका छौ । हामी पेशागत कलाकार पनि हैनौ । आफ्नो परम्परालाई जोगाई राख्न कलाकार भएका हौ । हाम्रो समाजमा भगवान रामको चरित्रलाई चित्रण गरेर सदभाव समाज निमार्ण होस भन्ने बिगत लामो समय देखि सन्देश प्रवाह गर्दै आएका छौ । दोधारा चा“दनीको यो एउटा ऐतिहासीक सस्कृतीलाई जोगाई राख्न गत वर्ष युवाहरुले कम्मर कसेका छन् । तै पनि राज्य पक्षले दोधारा चाँदनीको यो सास्कृतीक महोत्सवलाई बचाई राख्न तथा कलाकार तथा कला प्रेमीको सम्मान गनु पर्ने मैले महशुस गरेको छु ।